हिउँद लाग्यो, खाने होइन त अमला ? – MEDIA DARPAN
हिउँद लाग्यो, खाने होइन त अमला ?
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २० कार्तिक २०७७, बिहीबार १६:१२
अमला खाने मुख्य सिजन भनेको नै हिउँदको सिजन हो । चैत्र–वैशाखदेखि साउनसम्म फुलिरहन्छ । उक्त फूलमा भदौसम्म सकेपछि मंसिरसम्म फल लागिसक्छ । असोजदेखि माघसम्मको समय अमला खान लायक समय हो ।अमलाको प्रयोग धेरै किसिमले गर्न सकिन्छ । तर ग्रामीण भेगमा विशेषतः मुखमा अमला राखेर बिस्तारै बिस्तारै चपाउने शैली नै बढी प्रचलनमा रहेको देख्न सकिन्छ ।
आमलाको रस बिहान खाली पेटमा पिउनु उत्तम हुन्छ । अमलाको रस स्वादिलो हुँदैन र धेरैलाई यो मन पनि पर्दैन । तसर्थ, सबै औषधीय गुणहरूका बाबजुद पनि धेरैले यसलाई यो विधिबाट प्रयोग गर्ने गर्दैनन् । धेरैले अमलालाई मुखमा राखेर चपाउन नै सहज ठान्छन् ।
अमलाको रससँग मह वा सख्खर पनि मिसाएर खान सकिन्छ । यसलाई जसरी प्रयोग गर्दा पनि अन्य फलहरूमा जस्तो यसमा पौष्टिकता कम हुने सम्भावना कम हुन्छ । अमलाले हाम्रो मूत्र नलीलाई सफा बनाउन मद्धत गर्छ । यदि तपाईंलाई पिसाब सम्बन्धी समस्या छ भने यसले त्यसलाई दूर गराउन मद्धत गर्छ । अमला बाँझोपन र वीर्यसम्बन्धी कमजोरी भएकाहरूको लागि अत्यधिक उपयुक्त हुन्छ ।
अमला रगतको विकार क मगर्न एवं कब्जियत कम गर्न पनि मद्धतदायक हुन्छ । यो एक उत्कृष्ट प्रतिरक्षायुक्त खानेकुरा हो ।